२०७७ भदौ ३० मंगलबार ११:२१:००
बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी २०२० कै सर्वाधिक कमाइ गर्ने फुटबलर बनेका छन् । अमेरिकाको चर्चित पत्रिका फोर्ब्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको डाटाअनुसार मेसीको वार्षिक कमाई एक सय २६ मिलियन डलर रहेको छ । उनले यसपटक पनि युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई उछिनेका छन् ।
अर्थात् मेसीले सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीको सूचीमा रोनाल्डोलाई दोस्रो स्थानमा यथावत् राखेका छन् । रोनाल्डोको वार्षिक आम्दानी एक सय १७ मिलियन डलर रहेको छ । २०२० को सिजनमा रोनाल्डोको भन्दा मेसीको आम्दानी नाै मिलियन डलर बढी रहेको छ ।
फोर्ब्सका अनुसार मेसीले बार्सिलोनाबाट पारिश्रमिकबाट ९२ मिलियन तथा एन्डोर्समेन्टबाट ३४ मिलियन डलर आर्जन गरेका छन् । पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डोले युभेन्टसबाट वार्षिक पारिश्रमिक ७० मिलियन थापेका छन् ।
उनले एन्डोर्समेन्टबाट ४७ मिलियन डलर कमाए । रोनाल्डोको तुलनामा मेसीले क्लबबाट बढी पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । यसैकारण मेसी यसपटक सर्वाधिक कमाउने फुटबलर बनेका हुन् । सर्वाधिक कमाइ गर्ने फुटबलरमध्ये पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)का दुई खेलाडी क्रमशः तेस्रो तथा चौथो स्थानमा रहेका छन् ।
पहिलोपटक पिएसजीलाई युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल स्थान सुरक्षित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेमार जुनियर तथा केलियन एम्बाप्पे क्रमश: तेस्रो तथा चौथो बढी कमाउने खेलाडी हुन् । नेमारको वार्षिक आम्दानी ९६ मिलियन डलर रहेको छ ।
एम्बाप्पेले २०२० को सिजनमा ४२ मिलियन डलर कमाए । गत वर्षको तुलनामा एम्बाप्पे तीन स्थान सुधार गर्न सफल भएका छन् । ३० वर्षपछि लिभरपुललाई इंग्लिस प्रिमियर सिप उपाधि दिलाएका स्ट्राइकर मोहमद सलाहको ब्रान्ड भ्यालु बढ्नुका साथै वार्षिक आम्दानी पनि बढी रहेको छ । यसपटक उनी पाँचौँ स्थानमा छन् । पछिल्लो तीन वर्ष लिभरपुलका गोल मेसिनका रूपमा रहेका सलाहको वार्षिक आम्दानी ३७ मिलियन पाउन्ड रह्यो ।
२०१९–२० सिजनको इंग्लिस प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा च्याम्पियन्स लिगमा स्थान सुरक्षित गरेको म्यानचेस्टर युनाइटेडका मिडफिल्डर पाउल पोग्बा सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीको सूचीमा छैटो स्थानमा रहे । पोग्बाको वार्षिक आम्दानी ३४ मिलियन डलर रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ ।
बार्सिलोनाका फ्रेन्च स्ट्राइकर एन्टोनियो ग्रिजम्यान ३३ मिलियन डलरका साथ सातौँ स्थानमा छन् । एट्लेटिको म्याड्रिडबाट बार्सिलोनामा आएपछि ग्रिजम्यानको वार्षिक आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ ।
प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको क्याम्पमा खासै स्थान जमाउन नसकेका वेल्स स्ट्राइकर गेराथ वेबे आठौँ स्थानमा छन् । स्पेनिस क्लब रियलका प्रशिक्षक जिदानले उनलाई बिक्रीमा राखेका छन् ।
स्पेनिस ला लिगा सम्पन्न हुँदा बेलले जिदानको प्रशिक्षणमा केवल १४ खेलमा मात्र खेल्न अवसर पाए । बेलले २०२० मा २९ मिलियन डलर कमाउन सफल भए ।
जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखलाई छैटाैँपटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि दिलाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डोस्की नवौँ कमाइ गर्ने फुटबलर बनेका छन् ।
च्याम्पियन्स लिगमा १५ गोल गरेका लेवान्डोस्कीको कमाइ २८ मिलियन डलर रहेको छ । सर्वाधिक कमाइ गर्ने खेलाडीको सूचीमा एक मात्र गोलरक्षकका रूपमा डेभिड डी जिया रहेका छन् । म्यानचेस्टर युनाइटेडका एक नम्बर गोलरक्षक जियाले २०२० को सिसजनमा २७ मिलियन डलर कमाएका छन् ।
सर्वाधिक कमाइ गर्ने १० फुटबलर
स्थान खेलाडी क्लब डलरमा
१ लियोनल मेसी बार्सिलोना १२६ मिलियन डलर
२ क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस ११७ मिलियन डलर
३ नेमार पिएसजी ९६ मिलियन डलर
४ केलियन एम्बाप्पे पिएसजी ४२ मिलियन
५ मोहमद सलाह लिभरपुल ३७ मिलियन डलर
६ पाउल पोग्बा म्या. युनाइटेड ३४ मिलियन डलर
७ एन्टोनी ग्रिजम्यान बार्सिलोना ३३ मिलियन डलर
८ गेराथ बेल रि. म्याड्रिड २९ मिलियन डलर
९ रोबर्ट लेवान्डोस्की बा. म्युनिख २८ मिलियन डलर
१० डेभिड डी जिया म्या. युनाइटेड २७ मिलियन डलर
#मेसी # फुटबलर
यी हुन् रोनाल्डो र मेसीसँगै खेलेका १२ खेलाडी
अन्ततः लियोनल मेसीले बार्सिलोना नछोड्ने भए
खेलसँगै बडी बिल्डिङमा ध्यान दिने फुटबलर
मेसीकै पथमा सुआरेज